/Blog/garari/Maminitsi makumi matatu Kuti Uzive Nootropic Pramiracetam-AASraw
Posted on 03 / 07 / 2021 by 阿斯劳 akanyora garari.
Chii chinonzi Nootropic?
Izwi iri rinoreva makemikari echisikigo kana ekugadzira anogona kunge aine chinokanganisa hunyanzvi hwepfungwa. Ivo vanogona kuve chikafu zvokuwedzera, synthetic compounds, kana mishonga yemishonga. Mienzaniso yemaootropic ekunyorwa mishonga ndiRitalin, inokurudzira kurapa ADHD kana Memantine, mushonga wekushushikana.
Kuziva zvinowedzera kuwedzera huchenjeri, hunyanzvi, uye kurudziro mukana wakakosha mumakwikwi ezuva ranhasi. Iwe unogona kuvanzwa vachidaidzwa kuti "akangwara madhiragi" asi ivo vari zvakanyanya kupfuura izvozvo.
Izwi rekuti nootropic rinobva kumidzi yechiGiriki: "nous", zvinoreva pfungwa, uye "tropin", zvinoreva kutendeuka kana kukombama (kunge rwizi).
Zvakajairika maficha eNootropics
Kuti chemakemikari mubatanidzwa uonekwe se nootropic, inoda kusangana nematanho chaiwo. Kazhinji, inogamuchirwa nootropic
Inovandudza maitiro pasi pekunetseka
Inodzivirira uropi kubva mukukuvara kwemuviri kana kwemakemikari
Inovandudza cortical / subcortical kutonga
Iine yakaderera chepfu kana mhedzisiro-mhedzisiro
Synthetic compounds zvinotevera izvi zviyero ndezvekugadzirwa kwechangobva kuitika, asi tsika dzekare dzekurapa dzeChina neIndia dzinoratidza kushandiswa kwecannabis, ginkgo biloba, nemimwe miriwo yezvikonzero izvi chete.
Nei Pramiracetam Yakakurumbira?
Pramiracetam chikamu chemhuri ye racetam, boka remakemikari ekugadzira anogovera pyrrolidone nucleus. Zvinodhaka mumhuri iyi mishonga inorwisa mabhakitiriya, ndangariro, uye zvinowedzera musungwa.
Pramiracetam inokanganisa kutora zviyeuchidzo. Kutsvagisa kunoratidza kuti iri neuroprotective. Kusiyana nemishonga yakawanda mumhuri yeRacetam, kushanda kwayo kwakaedzwa pane vanhu vakuru vane hutano. Mazhinji macomputer e racetam akaedzwa kune vakuru vatove mukuderera.
Iyo ineotropic ine simba ine mhedzisiro inogara kwenguva refu inovaka nekufamba kwenguva. Humwe humbowo hunoratidza kuti hunogona kubatsira nekukuvara kwehuropi.
MUTSVENE ndiye nyanzvi yekugadzira Nootropic Pramiracetam.
Pramiracetam (N- [2- [di (propan-2-yl) amino] ethyl] -2- (2-oxopyrrolidin-1-yl) acetamide, CI-879, Pramistar, Neupramir, Remen) is a fat-soluble nootropic mune iyo racetam-kirasi yemakomponi.
Pramiracetam (CAS: 68497-62-1) yakaratidza kuve inoshanda mukurapa kwekunetseka kusagadzikana kwecerebrovascular uye inoshungurudza mavambo. Kuyedzwa kune vanhu vane kukanganisika ndangariro kwakaratidza kuti Pramiracetam inokwanisa kuwedzera kuyeuka. Kunyangwe pasina zvitsidzo zvinoratidza kuti izvi ndizvo zvinoitika muvechidiki vane hutano, vazhinji vakataura zvekunzwa mhedzisiro yekuvandudza ndangariro uye ndangariro. Tsananguro yekuti nei Pramiracetam inowedzera chiyeuchidzo, ndeyekuti yakaratidza kuwedzera kwakanyanya-kubatana kwakabatana choline.
Sainzi, Choline epamberi mamorekuru eiyo neurotransmitter acetylcholine, yakafanana chaizvo nevhitamini uye chinhu chakakosha chinovaka muviri. Choline inogona kuwanikwa mune zvimwe zvirimwa uye nhengo dzemhuka kana mukaka. Kuve nekudya kwakaringana uye nekudaro kuwanika kwakakwana kwe choline pamwe nekuwedzera maracetams sePramiracetam iyo inowedzera kukosheswa kwecholine, inogona kuve nemhedzisiro pane ndangariro.
Pramiracetam inogadzirwa ne racetam molecule ine zvimiro zvakafanana nemubereki molekyuli Piracetam. Yakatanga kugadzirwa muna 1984 nekuda kwekugona kwayo kudzivirira amnesia inotangira kubva kumagetsi. Kuenzaniswa nedzimwe nhengo dzemhuri ye racetam, Pramiracetam haina kuongororwa zvishoma asi ine humbowo hwekubatsira kwayo vanhu.
Muzvidzidzo, Pramiracetam yaiita kunge inoshanda kana ikatorwa nguva pfupi isati yaedzwa iyo inogona kuita kuti ive yakanaka yekuwedzera panguva yekuongorora kwedzidzo kana kushanda kwakanyanya zvikamu uko kunatsiridzwa ndangariro uye kugona kwekuziva kunoitika zvinobatsira. Zvidzidzo zvevanhu zvinotsigira pfungwa iyi asi hazvipe humbowo hwakakwana hwehuwandu kusvikira nhasi.
Kufanana nemaracetams ese, maitiro ari kumashure kwepramiracetam haana kunyatsonzwisiswa, kunyanya nekuda kwekushaikwa kwekutsvaga kwakadzama.
Nekudaro, zvimwe zvidzidzo zvekutanga zvakanongedzera kune mashoma anotevera maitiro anogona kuita:
▪ Inogona kuwedzera acetylcholine mazinga (nekuwedzera choline inotorwa mumasero ne30-37%);
▪ Inogona kuwedzera nitric oxide kugadzirwa muuropi;
▪ Inogona kusanganisira adrenal mahormone senge aldosterone uye cortisol (corticosterone);
Nekudaro, data pamusoro pemaitiro ari pamusoro rinouya rinenge chete kubva kuzvidzidzo zvemhuka - kunyanya mumakonzo nemakonzo - uye saka hapana mhedziso dzakasimba dzinogona kuitwa parizvino nezve pramiracetam inogona kuita nzira muhuropi hwevashandisi vane hutano hwevanhu.
Pramiracetam ndeye yechokwadi nootropic, Yakagadzirwa chaizvo kuti iwedzere kugona. Kubatsira kwayo nemhedzisiro zvinosanganisira zvinotevera:
Pramiracetam inoyeuchidzwa ndangariro inosimudzira, yakaedzwa zvakanyanya kwemakumi makumi emakore uye yakaratidza kushanda mune zvese zvidzidzo zvemhuka‍ uye zvipatara zviedzo zvevakuru vechidiki vane kukanganisika kwekuziva nekuda kwekukuvara kwehuropi.
Pramiracetam inovandudza ndangariro zvese nekusimudzira hippocampus, iyo chikamu chehuropi chinonyanya kukonzera kugadzirwa kweyeuchidzo nyowani uye nekuita seyakasimba anti amnesic iyo inoderedza kukanganwa. Vazhinji vashandisi vanotaura zvakare kusimudzira kwakanyanya mukumhanyisa yekumhanyisa, chirevo chakatsigirwa nezvidzidzo zvemhuka
Pramiracetam's mukurumbira seyakajairika yekuziva inosimudzira iyo inowedzera kungwarira uye inowedzera kudzidza kugona yakaita kuti ive sarudzo inozivikanwa pakati pevadzidzi vachitsvaga yakavimbika yekudzidza rubatsiro.
Kunyangwe pasina zvidzidzo zvevanhu pane izvi zvakasarudzika zvakanyorwa, zvidzidzo zvemhuka zvinoratidza kuti pramiracetam inobatsira kune nzira dzinoitisa kudzidza nekuvandudza ndangariro nekuwedzera neuronal mhando nitric oxide synthase (NOS) chiitiko mune hippocampus. Basa reNOS rinosanganisirwa nekusimudzira neural uye huropi. mapurasitiki, ese ari maviri akakosha kune ese mativi ekuziva.
Pramiracetam inozivikanwa zvakare kuti inowedzera kukwirira-kwakabatana choline kunotora muhippocampus, nokudaro zvisina kunanga kukonzeresa kugadzirwa kweacetylcholine, yakakosha neurotransmitter inosunganidzwa zvakanyanya nekudzidza uye kugona.
Vhura-label miedzo muvarwere vane chekutanga chinodzikira dementia inoratidza kuti Pramiracetam yakanyatso shandura amnesia, zvakanyanya kusimbisa kuyeuka uye kudzikisa kukanganwa.
Mune zvimwe zvidzidzo, izvo zvakayera mhedzisiro yepramiracetam uye imwe racetam-kirasi nootropics kune varwere vane hunyoro kusvika pakati nepakati dementia, pakanga paine kuyerwa kunoyerwa kwekuziva uye ndangariro. Mhedzisiro iyi inogona kunge yakatsanangurwa, zvirinani muchikamu, kune nootropic yekukwiridzira kwemaurotransmitter aripo.
Kunyangwe pramiracetam isina kubvumidzwa sekurapa kweAlzheimer kuUS, inowanzo gadzirirwa muEurope kurapwa kweye dementia uye zvimwe zvinonzwisisika zvine chekuita nechirwere cheAlzheimer uye kumwe kushushikana kwetsinga.
Kunyange pasina hunyanzvi hwekutsvagisa pramiracetam pamabatiro ehukama hwevanhu, vazhinji vashandisi vanotaura kuti zvinovaita kuti vawedzere kutaurirana nekugadzira munharaunda. Mhedzisiro iyi inogona kutsanangurwa, zvirinani muchikamu, nepramiracetam's inozivikanwa nemweya blunting mhedzisiro, iyo dzimwe nguva inorondedzerwa seyakafanana neiyo yaRitalin. Mhedzisiro iyi inogona kudzikisira kushungurudzika munharaunda uye, zvakare, inowedzera kugona kwevanhu munharaunda.
Pramiracetam inozivikanwa kuve ine yakawanda neuroprotectant mhedzisiro, inokwanisa kuvandudza kugona mukati mevanhu vakasangana nekushungurudzika kwepfungwa.
Zvidzidzo zvakare zvakaratidza kuti zvine chinoratidzirwa neuroprotective mhedzisiro painoshandiswa panguva yekoronary yekupfuura kuvhiya uye pakurapa kusagadzikana kwekuziva kwecerebrovascular mavambo.
Pramiracetam Chipimo chemushonga Referensi
Pramiracetam kazhinji inouya iri sehupfu, pre-made capsules, kana mahwendefa. Vamwe vashandisi vanotaura kuti fomu yehupfu ine kuravira kwakasimba kusingafadzi, uye nekudaro vanosarudza kushandisa iyo capsule kana mafomu epiritsi pane.
Sekureva kwevamwe vaongorori, hupfu uye capsule mafomu anogona kuve nekukurumidza kunwa mwero kupfuura fomu repiritsi. Nekudaro, iko kuzara kwesimba uye kushanda zvinofungidzirwa kunge zvakaenzana zvakaenzana pamhando dzakasiyana.
Mune imwe yemiedzo mishoma yakaitwa kusvika pari zvino, muyero wakazara we 1,200 mg wakashandiswa, wakakamurwa kuita maviri 600-mg doses kana matatu 400-mg doses akapararira zuva rese.
Sezvo inhengo yemhuri yemaracetam yemishonga, pramiracetam inofungidzirwa kuti inotsamira pane choline pamhedzisiro yayo, uye kuishandisa kunogona, nekudaro, kunopedza choline yemuviri. Neichi chikonzero, dzimwe nguva zvinokurudzirwa kusanganisa maracetams neine sosi ye choline, senge alpha-GPC kana citicoline. Nekudaro, zano iri rakavakirwa padhata chete kubva kuchidzidzo chimwe chete chemhuka, saka izvi hazvifanirwe kuturikirwa senge chero rudzi rwekurudziro "yepamutemo" kana "yekurapa-yakatenderwa".
Ruzivo Rwakakosha: Pramiracetam sitaki
Pramiracetam inoshanda mushe pachezvayo asi inogona zvakare kuve isimba rine simba kune mamwe maootropic, ichiwedzera kushanda kwayo.Iyo inonyanya kushanda potentiator yemamwe maRacetam, ichiita kuti iwedzere kuwedzera kune mazhinji nootropic matura.
Kuwedzera choline kuwedzera kune pramiracetam stack inogona kuve nemabhenefiti akawanda. Kwete chete iyo inogona kuwedzera pramiracetam mhedzisiro, asi zvakare inogona kudzivirira kutemwa nemusoro, inova inonyanya kutaurwa mhedzisiro mhedzisiro. Nekuti pramiracetam ine mhedzisiro yakadaro, zvinokurudzirwa kuishandisa yega yega kwenguva yekuyedza usati wabatanidza iyo nemamwe nootropics. .
Kune mienzaniso miviri nezve Pramiracetam stack:
❶ Pramiracetam uye Oxiracetam Stack
Kuisira pramiracetam ine simba rekusimudzira senge adrafinil kana oxiracetam inogona kusimbisa kungwarira kwepfungwa uye nekuiwedzera kwenguva yakareba.
RamPramiracetam uye Aniracetam Stack
Kuisira pramiracetam ine simba rinopesana nekuzvidya moyo seaniracetam inogona kupa vashandisi kukwirisa tarisiro uye kusimbisa pavanenge vachivandudza mamood uye vachideredza manzwiro epfungwa uye kushushikana. Vamwe vashandisi vanoti stack iyi inokurudzira kugona kwevanhu uye inovandudza kugona kwavo kuita kwevanhu.
Pramiracetam Side Mhedzisiro
Pramiracetam kazhinji inoregererwa kunyangwe pamadosi epamusoro, uye mashoma akanyanya mhedzisiro mhedzisiro akanyorwa.
Kune mishumo isingawanzoitika yemigumisiro midiki uye yekufamba kwenguva, kusanganisira kutemwa nemusoro, kushushikana kwepamuviri, uye kunzwa kwekutya kana kugungunuka.
Musoro unobatanidza ne choline kupera ndeye chaiwo maratidziro eracetam mhando nootropics uye anogona kudzivirirwa nekutora pramiracetam pamwe chete neyakawedzera choline.
Pramiracetam haina-muropa, uye hapana mhedzisiro yakakosha yekushandisa kwenguva refu yakanyorwa. Pane humbowo hwekuti pramiracetam inogona kunyange kusimudzira hutano hwehuropi uye kunyange kudzorera basa muhuropi hwekukwegura.
Ndeipi iri Nzvimbo Yakanyanya Kutenga Pramiracetam Online?
Kunyange chiri chokwadi kuti Piracetam ndeimwe yeanootropics anovimbisa, inongova nezvidzidzo zvishoma zvekurapa uye yakawanda yacho, kana isina kunyorwa, ndeyezvidzidzo zvemhuka nekutsvagurudza. Zvakanakira zvikuru kune vakura vane hurema hwepfungwa asi zvinokurudzirwawo kutorwa nevana nevakuru vechidiki zvine chekuita nezvavanoda. Zvakachengeteka kushandisa nepo zvichinyanya kushanda kana zvangoiswa nezvimwe. nootropics.
Kune nzvimbo dzakawanda dzine Piracetam yekutengesa online. Nekudaro, zviri nani kutenga kubva kune webhusaiti inosangana nemhando dzemhando mundima iyi. AASraw mutengesi anovimbika weNootropics, zvigadzirwa zvavo zvese zvinogadzirwa pasi peCGMP uye mhando inogona kuteverwa chero nguva, sekuziva kwedu. Unogona kufunga nezvavo kana iwe uchida kutenga Pramiracetam powder.
Inogona kuve yakatengwa zvakanyanya kubva kune uyu mutengesi. Ivo vanotengesa akavimbika makomponi neCoA uye vanotakura pasirese. Kunge chero mumwe mishonga, zvimwe zvitoro zvingangoda mushonga usati watenga. Piracetam mitengo inogona zvakare kusiyana zvichienderana nenzvimbo.
 Vashandi, Iyo Pink Sheet. Chivabvu 27, 1991 Cambridge Neuroscience Kugadzira Warner-Lambert's Pramiracetam
 FDA Orphan Zvinodhaka Zvirongwa uye Zvinotenderwa Dhatabhesi Peji rakawanikwa Nyamavhuvhu 2, 2015
 Drugs.com Drugs.com International zvinyorwa zvepramiracetam Peji yakasvika Nyamavhuvhu 2, 2015
 A Auteri et. al. Yepasi rose magazini yekiriniki yekuongorora mishonga, 12 (3), 129-132 (1992-1-1)
 Chiitiko mukushandisa kwepramistar, gadziriro nyowani ye nootropic, mukurapa kusagadzikana kwendangariro muvarwere vane chirwere cheperebrovascular pathology. 2003 Dec.
 Kushandiswa kwemaootropic vamiririri pakurapa kwakaomarara kwevarwere vane kukanganiswa kwehuropi. 2008 Chivabvu 30.
I7 Best Nootropics (Smart Drugs) mumusika we2021
I "Tsime Rehudiki": NAD + & NMN seAdvanced	Curcumin Yakagadzirwa J-147 Bata AD, Anti-kukwegura, Kushungurudzika Dambudziko (MDD)